Semalt: तपाईंको व्यवसायको लागि SEO प्रकारका सामान्य प्रकारहरू
प्रत्येक व्यवसायले उनीहरूको बिक्रीलाई सवारी चलाउनको लागि अनलाइन विधि अपनाएर फाइदा लिन सक्दछ। उदाहरण को लागी, कम्पनीहरु विशाल इन्टरनेट संसाधन र ग्राहकहरु को प्राप्त को धेरै क्षेत्रहरु को उपयोग गरेर फाइदा लिन सक्छ। बिभिन्न कम्पनीहरूका बिभिन्न विपणन विधिहरू छन्। जहाँसम्म एसईओको सवाल छ, वेबसाइटहरूले उनीहरूको ई-कमर्स प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्न र तिनीहरूमा डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियाहरू प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्दछन्। डिजिटल मार्केटिंग तिनीहरूको ग्राहकहरूको ब्राण्डको दृश्यता बढाउने सामान्य विधि हो। धेरै जसो केसहरूमा नामहरू ती व्यक्तिहरूको लागि दृश्यमान हुन्छन् जसले लक्षित लिंक प्रयोगकर्ता खाताका ग्राहकहरूलाई लि .्क गरेका छन्। यो एक प्लेटफर्म समावेश गर्न आवश्यक छ जहाँ तपाईं जैविक खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरूबाट ट्राफिक ल्याउन सक्नुहुनेछ।
फ्रेंक Abagnale, Semalt डिजिटल सेवाहरु का एक अग्रणी विशेषज्ञ, SEO प्रदर्शन विधाहरु परिभाषित गर्दछ:
१. खोजशब्द अनुसन्धान
जब तपाइँको वेबसाइट सामग्री को विकास, तपाइँ प्रतिस्पर्धी कीवर्ड को उपयोग गर्न आवश्यक छ। यो प्राप्त गर्ने केहि उत्तम तरिकाहरू भनेको तपाईंको सामग्रीमा समावेश गर्न कुञ्जी शब्दहरूको लागि अनुसन्धान गरेर हो। तपाइँको हेडि and र मेटा वर्णन पनि तपाइँको वेबसाइट मा पूरा प्रक्रिया फलदायी बनाउने केहि कुञ्जी शब्द हुनु पर्छ। यो कुञ्जी शब्द योजना छनौट गर्न आवश्यक छ जससँग लामो पुच्छर कुञ्जी शव्द छन्। यी शब्दहरूको उच्च खोज मात्रा साथ साथै कमजोर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ।
२. तपाईंको वेब पृष्ठ सिर्जना र अनुकूलन गर्दै
केहि वेब विकास कार्यहरू खोज इन्जिन अनुकूलनको अंश हुनसक्दछन्। उदाहरणका लागि, अवतरण पृष्ठहरू सिर्जना गर्ने साथ साथै एसईओ को लागी एक व्यक्तिगत वेब पृष्ठ अनुकूलन साधारण छ। तपाइँ तपाइँको ए texts्कर ग्रन्थहरूको साथसाथै खोज इञ्जिनहरूमा अन्य सूचीबद्धहरू पनि अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। एक उच्च गुणस्तरको छविहरू प्रयोग गर्नुहोस् जसमा कुञ्जी शव्दहरू सहित एल्ग ट्याग हुनुपर्दछ। खोज ईन्जिनका लागि प्रत्येक सामग्री अनुकूलन एक प्रमुख प्रक्रिया हुन सक्छ।
Link. लिंक भवन
जब खोजी ईन्जिनमा तपाइँको वेबसाइटको रैंक बनाउने कुरा आउँदछ, लि link्क निर्माण जस्ता केही डोमेन अधिकार कारकहरू विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको कोठा भित्र अन्य डोमेन बाट ब्याकलिlin्क प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईं प्रत्यक्ष ट्राफिकबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं अतिथि पोष्टिंगको समयमा उदाहरणका लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य केसहरूमा तपाईले खोजी ईन्जिनमा उच्च पदको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ जुन उच्च डोमेन प्राधिकरण र प्रासंगिकताको कारण आउँदछ। तपाईंको वेबसाइटमा धेरै आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नु तपाईंको डोमेनको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको मतलब तपाईले आफ्नो साइटलाई खोज इञ्जिनका लागि अप्टिमाइज गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले खोज ईन्जिनमा केहि विशिष्ट कुञ्जी साइटहरूको लागि खोजी गर्ने व्यक्तिको केही महत्त्वपूर्ण प्रतिशत प्राप्त गर्ने मौका खडा गर्नुभयो। उदाहरण को लागी, व्यक्तिहरु यातायात बाट लाभान्वित हुन सक्दछ जुन केहि SERP पृष्ठहरुबाट आउँदछ केही विशेष कुञ्जी सर्तहरू।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको अर्थ विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन सक्छ। तपाइँको वेबसाइटमा खोज इञ्जिन अनुकूलन प्रविधिको प्रकार थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। खोज इञ्जिन अनुकूलन मा माथिको को केहि समावेश गरी धेरै प्रक्रियाहरु शामेल हुन सक्छ। केहि SEO प्रविधिहरू जुन तपाइँको साइटलाई फाइदाजनक हुन सक्छ यस गाईडमा प्रस्तुत गरिएको छ। जैविक SERP पृष्ठहरूमा सम्पूर्ण इन्टरनेट मार्केटि procedure प्रक्रिया सफल बनाउँदै तपाईं आफ्नो वेबसाइटको रैंक उच्च बनाउन सक्नुहुनेछ।